Amélie Nothomb ›Blog yaJuan Herranz
Mabhuku angu akakurudzirwa naAmélie Nothomb. Ongororo yakakosha yezvakanakisa zvemunyori uyu. Mazano ekuti unakirwe nemabasa ako anonakidza.
3 akanakisa mabhuku naAmélie Nothomb
Nechitarisiko chakasarudzika, kutenderedza kwaakavaka mufananidzo une simba wemunyori wekugadzira uye akangwara zvaari chaizvo, Amélie Nothomb anozvipira kuzvinyorwa zvine simba rakasiyana-siyana pachinhu ichi. Izvo zviwanikwa zvakasiyana zvakanyudzwa mune yakasarudzika aesthetic iyo ...
Epicene Mazita, naAmélie Nothomb
Iine poindi iyoyo yekunyora uye kunyengedza, kusanzwisisika kwemamwe mazita kunoshandira Amélie Nothomb kumisikidza chirevo chinowanikwa chiripo chakashongedzwa nechinhu chakavanzika umo munyori uyu anofamba zvinofadza kwazvo. Uye saka isu tinotarisa kune rudo rwaClaude naDominique uye chibereko chemusikana ...
Riquete el del pompano, naAmélie Nothomb
Imwe yeminhenga inoshamisa kwazvo iye zvino ndiAmélie Nothomb. Ruzivo rwake rwekare rwakaburitswa muSpain, The Count Neville Crime, rwakatitora isu kuenda kune yakasarudzika Detective riano ine seti dhizaini iyo, kana yawanikwa naTim Burton, inozopedzisira yave kuita firimu, pamwe nezvakawanda zveyakagadzirwa kare. Asi mu…
Mhosva yeCount Neville, naAmélie Nothomb
Iko kutarisisa kwerinovhero naAmélie Nothomb, butiro rayo, chirevo charo, chakandiyeuchidza nezve mamiriro eiyo Hitchcock yekutanga. Iyo esoteric kubata iyo yakatsvedza kuburikidza nehupenyu hwepasi rose hwemaguta mukutanga kwezana ramakumi maviri emakore. Uye chokwadi ndechekuti pakanga pasina chakakanganisika nedudziro yangu pakutanga kuona. ...